Ngo lanamuhla abantu emhlabeni njalo begijima endaweni ethile ukuze kwenziwe ngaso sonke isikhathi, ngokuthi umsebenzi ezivelele njalo sebunzimeni. Kodwa akubona bonke abantu kungaba ngokwanele ukubhekana ngokuphumelelayo Nakata ku imizwelo yakhe enamandla. Ngenxa ukucindezeleka njalo, sezinzwa ukucindezeleka futhi bethukile ukuhlaselwa kwenzeka. Izimpawu, ukwelashwa kanye izimbangela yalezi nokuqubuka balithanda ezokwelapha zesimanje esanda kuqalwa. Kodwa eziningana impela kubantu abaphethwe yilesi sifo.
Izimpawu uvalo zihlanganisa lokhu okulandelayo:
- kuba nzima ukuphefumula, kubonakala sengathi umoya akwanele;
- ukuqaqamba inhliziyo, sisuke singqongqoza esifubeni noma umsebenzi ngezikhathi ezithile;
- iqala agule noma uzizwe isiyezi, ogulayo, wonke umzimba kukhona ubuthakathaka, umuzwa wokuthi siyeza idangele;
- ngokuqinile kuphakamisa noma kwehlisa umfutho wegazi, beqhaqhazela;
- ukuhlaselwa zikufice indoda ngokuzumayo;
- kukhona ukuthuthumela ezingalweni nasemilenzeni, ukuba ndikindiki noma ukuluma.
The main uphawu - umuzwa nasekwesabeni ukufa noma sumasshest viem. Ngezinye izikhathi, ngesikhathi kuhlaselwa abantu uvalo begijima beya noma bebuya esakhiweni, ezinye nokugquma ukucela usizo noma isiphuzo amaphilisi ngokuvamile kudingeke ushayele i-ambulense. Ezimweni ezinjalo kwakha oyiphutha okuqala senhliziyo noma ezinye isifo esibulalayo. Muva nje, isifo sekuvame kakhulu kubantu. Iziguli besaba ukuthi ukuhlasela ngolunye usuku kungaphumela ekufeni. Nokho, odokotela abafunda uvalo, izimpawu, yokwelapha lezi zifo, akholelwa ukuthi ukuhlasela okunjalo musa usongo ekuphileni. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi isifo siqhubeka. Bayanda kukhona ukucindezeleka, umuntu ozuza izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba zokwesaba, okungase kushiya uvalo uhlasela bona. Lokhu kuholela yokuthi abantu nomkhawulo umhlaba wabo ngaphandle kwezindonga ezine.
Yiqiniso, kufanele lokhu alwa, awukwazi ukuvumela isifo uthole kangcono psyche. Odokotela musa ukuhlala phansi bese uzama ukuthola izixazululo ezingase ukumisa uvalo. Izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela isifo kufundvwe ngokucophelela futhi kwenza ucwaningo. Kodwa, ngeshwa, namuhla, odokotela baye basuka okwanele umbuzo sendlela yokuphatha abanye uvalo. Bafika esiphethweni sokuthi ngesikhathi uvalo , ukukhululwa okukhulu ku-unjengonikela ngegazi lemali ngokwanele ezinkulu adrenaline. Nokho, okwamanje ayikho indlela ukuthola ukusuka imithi uvalo nokuhlasela. Zonke kwemithi enqunyiwe ngu odokotela, ukunciphisa amandla ukuhlaselwa ukwesaba okukhulu noma izimpawu zabo. Mhlawumbe kuphela indlela ephumelela iyona kwengqondo of uvalo. It ihlose embule izizathu equlekile ngoba nesenzakalo yabo nokuthuthukisa kubo ukuze asuke esehambe unomphela. Phakathi ukwelashwa amaseshini, iziguli zifunde ukuzithiba kokubhubhisa uvalo ukuhlaselwa ngendlela efanele usaqala nesenzakalo yayo. ukuvala abacaphuni abangobe okunjalo olwenziwa kuphela izisebenzi eziqeqeshiwe.
Kanjani amandla okubhekana uvalo?
Uma ngabe akasebenzisi kakhulu ke ungakwazi elizama ngayo ukubhekana uvalo bebodwa, ngaphandle kosizo ochwepheshe. Into ebaluleke kakhulu - udinga uphumule futhi ukubamba umoya wakhe. Thatha isikhundla ukhululekile, uphumule umzimba wakho kanye nemisipha, udonsa kakhulu umoya futhi ekhululekile.
Enye indlela enhle ukuqedela "ahlanzayo ikhanda": kuyadingeka ukumisa imicabango egijima futhi ngigxila kulokho ngempela manje lapho, futhi nakho konke okunye - nenkohliso umcabango.
Kodwa lezi zindlela kungasiza kuphela ngendlela efanele usaqala lesi sifo, kanti ezimweni ezibucayi ngaphezulu kungcono ujike ochwepheshe.
Ukudla okumanzi okungenayo imvubelo